Isbedelka Nano ugu fiican
Bixinta ugu fiican Nano qiimaha sarrifka maanta ee dhammaan suuqyada lacagta digital. Suuqa ugu fiican si aad u iibsato ama u iibiso Nano maanta.
Qiimaha ugu fiican ee la iibsado Nano $ 0.715131 NANO/ETH OKEx
Qiimaha iibka ugu fiican Nano $ 0.774231 NANO/USDT OKEx
Ugu fiican Nano heerka wuxuu ka muuqdaa isweydaarsiga lammaaneyaasha lacagta digital oo ku saabsan isweydaarsiga. Nano Heerka lacagta digital heerka waxaa loo dejiyey macaamil ganacsi kasta waxayna kuxirantahay dheelitirka saadka iyo baahida. Tirada iibsadayaasha iyo iibiyaasha Nano ee ku jira isweydaarsiga kasta oo crypto kala iibsiga waa ka duwan yahay. Waa ay fududahay in la fahmo in Nano sicirka sarrifka lacagta digital ayaa si gaar ah loogu dejiyey sarrif kasta oo crypto ah.
Kombiyuutarka ugu fiican Nano
Qiimaha iibsiga ugu fiican ee Nano maanta waa $ 0.715131 oo leh NANO/ETH ganacsiyo ah OKEx suuqa sarrifka.
Qiimaha iibka ugu badan ee Nano maanta waa $ 0.774231 oo leh NANO/USDT ganacsiyo ku saabsan OKEx suuqa kala iibsiga.
Boorsada ugu wanaagsan Nano boorsada waa fikrad shaqsi ah milkiile kasta oo lacagta digital ah. Boorsada jeebka loo yaqaan 'Crypto wallet' waxaa inta badan lagu go'aamiyaa fududeynta, isku hallaynta iyo amniga. Boorsada ugu fiican Nano boorsada ayaa leh aaminka ugufiican iyo amniga ugufiican. Isweydaarsiga ugu fiican ee lacagta digital Nano waxaa lagu xushay waqtiga dhabta ah iyadoo la darsayo natiijooyinka sicirka ganacsiga ee iibsashada iyo iibinta lacagta digital.
Suuqa ugu fiican Nano
Waa macquul inay tahay in la qaato in haddii dhowaan la isweydaarsiga uu jiro qiimaha ugu wanaagsan ee iibsiga ee Nano, markaa ay habboon tahay in la raadiyo heerka ugu sarreeya ee sarrifka lacagaha 'lacagta digital'. Qiimaha ugu wanaagsan ee iibsashada, iibinta lacagta digital Nano "18/01/2020 maanta waxaan ku soo bandhigaynaa shaxda kor ku xusan si loo fududeeyo aragtida. The Nano Qiimaha sarrifka ugu fiican maanta 18/01/2020 waxaan kuu falanqeynayaa qiimeynta ugu fiican ee lacagta digital-yada dhammaan ilaha dhabta ah ee internetka. Heerka ugu wanaagsan Nano sicirka iibsigu waa xagga sare ee bogga. Heerka macaamil ganacsi ayaa lagu soo bandhigay doolar.
BTC USDT ETH EUR USD BCH DOGE
Jadwalku wuxuu muujinayaa qiimaha sarrifka Nano maanta oo dhan suuqyada lacagta digital. Heerarka sarrifka ee dhammaan ganacsiyada ganacsiga waxaa loo beddelaa Dollar.
Kraken NANO/BTC $ 0.73 $ 32 900 -
Kraken NANO/USD $ 0.74 $ 28 109 -
Kraken NANO/EUR $ 0.73 $ 24 315 -
Kraken NANO/ETH $ 0.75 $ 3 357 -
OKEx NANO/BTC $ 0.77 $ 27 824 -
OKEx NANO/USDT $ 0.77 $ 2 231 -
OKEx NANO/ETH $ 0.72 $ 75 -
CoinEx NANO/BTC $ 0.75 $ 92 924 -
CoinEx NANO/USDT $ 0.75 $ 63 702 -
CoinEx NANO/BCH $ 0.74 $ 57 822 -
KuCoin NANO/BTC $ 0.74 $ 45 041 -
KuCoin NANO/USDT $ 0.74 $ 22 592 -
KuCoin NANO/ETH $ 0.74 $ 4 350 -
Dex-Trade NANO/USDT $ 0.73 $ 943 -
Dex-Trade NANO/BTC $ 0.73 $ 586 -
Dex-Trade NANO/ETH $ 0.73 - -
HitBTC NANO/BTC $ 0.74 $ 111 809 -
HitBTC NANO/USDT $ 0.75 $ 65 200 -
HitBTC NANO/ETH $ 0.76 $ 4 048 -
DigiFinex NANO/BTC $ 0.75 $ 846 582 -
DigiFinex NANO/USDT $ 0.75 $ 265 443 -
Gate.io NANO/USDT $ 0.76 $ 1 727 -
Gate.io NANO/BTC $ 0.72 $ 283 -
Huobi Global NANO/USDT $ 0.76 $ 96 919 -
Huobi Global NANO/BTC $ 0.76 $ 45 556 -
Huobi Korea NANO/BTC $ 0.74 $ 336 -
ProBit Exchange NANO/USDT $ 0.73 $ 142 977 -
Bitvavo NANO/EUR $ 0.73 $ 11 490 -
Binance US NANO/USD $ 0.73 $ 36 653 -
BitZ XRB/BTC $ 0.73 - -
CoinBene NANO/BTC $ 0.76 $ 163 429 -
Txbit NANO/BTC $ 0.73 - -
DragonEX NANO/USDT $ 0.75 $ 234 855 -
Mercatox XRB/DOGE $ 0.73 $ 3 581 -
Coindeal NANO/BTC $ 0.74 $ 12 019 -
Coinall NANO/BTC $ 0.73 $ 6 694 -
WazirX NANO/USDT $ 0.73 $ 187 -
Waxaan had iyo jeer soo bandhignaa heerka ugu fiican ee Nano sicirka iibsashada marka loo eego dollar marka la barbar dhigo fudud. Goobta lacagta ayaa muujineysa lacagta loogu talagalay in lagu iibsado Nano U dhaw sicirka iibka ugu wanaagsan ee lacagta digital waxaad ka heli doontaa isku xirka suuqa sarrifka kaas oo Nano uu iibinayo qiimaha ugu fiican. Qiimaha ugu wanaagsan ee lagu iibinayo Nano wuxuu noqon karaa markii lagu iibinayo lacag yar oo caan ah ama lacagta digital kale.
Isweydaarsiga ugu fiican ee iibka iyo iibsashada Nano "waxay ku jiraan miiska adeega websaydhka. Isweydaarsiga waxaa loo kala saaray heerka ugu wanaagsan ee loo beddelay doollar marka la iibsanayo iyo iibinta Nano lacagaha iyo lacagaha kale ee loo yaqaan 'aaladaha lacagta'. Waad arki kartaa Nano Macaamil ganacsi oo loo beddelo lacag kale ama lacagta digital haddii aad isticmaasho shaandhaynta lacagaha kale ee ku yaal miiska kor u dhaafka isweydaarsiga lacagta digital. Macluumaadka boggayaga ku saabsan isweydaarsiga ugu fiican ee iibsiga iyo iibinta Nano ayaa si joogto ah loogu cusbooneysiiyaa khadka tooska ah.